Ungasisebenzisa kanjani isifo sikashukela sikashukela > Ukwelashwa nokuvimbela
Isifo sikashukela - ukulungiswa kwejeli kwabanesifo sikashukela
Ukwelashwa ngokuphelele kwesifo sikashukela kufaka phakathi ukuthatha imishanguzo, ukudla, impilo esebenzayo kanye nokuphumula okuhle. Ukudla okuningi okuvinjelwe kufanele kungafakwa ekudleni okujwayelekile. Ukunxenxa ukuntuleka kwezinto eziwusizo ekudleni kokudla, kunconywa ukusetshenziswa komkhiqizo wesifo sikashukela.
Lesi isengezo esikhethekile sokondleka sokudla. Hhayi isengezo sokudla noma isidakamizwa. Ayinazo iziphikiso. Umkhiqizo uyatholakala ngefomu le-gel. Lokhu kunomthelela wokufakwa ngokushesha kwezakhi zomzimba futhi kusiza ukugwema imiphumela emibi emgodini wokugaya ukudla.
Isifo sikashukela sakhiwa ososayensi baseRussia. Lezi zifundo zincike ezibalweni zamacala atholakele abantu abanesifo sikashukela eRussia naseJapan kanye nemininingwane yomthelela wokuguga komzimba emzimbeni wabantu abaphethwe yilesi sifo. Ithuluzi lithole isitifiketi sombuso kanye nombono wochwepheshe.
Umkhiqizo awunawo amakhalori aphansi, awunawo ushukela. Into esebenzayo i-fucose. Itholakala ku-brown yolwandle olunsundu, ekhula oLwandle Olumhlophe. UFucose ungena kumaseli womzimba agulayo, ngenkathi esebenza ngokuzikhandla nge-insulin, abuyisele ukuzwela kwama-receptors.
Ukwakheka kwezinye izinto eziningi eziwusizo. I-Chromium isekela isimo somzimba esivamile sesiguli, silawula ukugcwala kweglucose egazini. I-Cranberry iqinisa ukuzivikela komzimba, isebenza njengomthombo we-vitamin C. i-artichoke isiraphu isusa ubuthi kanye nobuthi emzimbeni.
Isifo sikashukela siqukethe amaminerali angaphezu kwama-40: iodine, iphosphorus, i-selenium, i-magnesium, i-potassium, i-silicon, i-zinc, i-calcium. Umkhiqizo ucebile ngamavithamini wamaqembu B, D, F, H, A, C, E, kanye ne-fiber kanye nama-amino acid. Ngenxa yokwakheka kwemvelo, umkhiqizo uvunyelwe abantu abadala nezingane.
kulula ukugaya futhi akubangeli imiphumela emibi,
isiza ukuhlanza umzimba,
kwehlisa ushukela wegazi ngokusebenza kuma-insulin receptors,
ikuvumela ukuthi ukhuphule isikhathi phakathi kokufakwa komthamo owalandela we-insulin yohlobo 1 sikashukela,
qinisa isimo esijwayelekile, sithinta kahle uhlelo lwenhliziyo nethambo lesisu,
Isifo sikashukela sikhonjiswa ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lokuqala nohlobo 2. Ithuluzi lisebenza njengomthombo owengeziwe wamavithamini kanye namaminerali wokudla kwesifo sikashukela.
Isifo sikashukela sifakwa emgqonyeni weziguli ngokungabekezeleli okuthile kwento esebenzayo noma ezinye izinto ezisizayo.
Isidakamizwa asinconywa kubantu abane-hypersensitivity iodine. Ungawuphuthi umuthi ezigulini ezihlushwa yizifo lapho imikhiqizo equkethe iodine iqhutshwa khona.
Uma kwenzeka ungasabeli kahle, kubalulekile ukuthi uyeke ukuthatha ijeli bese uthintana nochwepheshe.
Imiyalo yokusetshenziswa kwesifo sikashukela (indlela nomthamo)
Kunconywa ukuqala ukuthatha isifo sikashukela ngemuva kokubonana nodokotela. Uchwepheshe uzosiza ekutholeni inkambo efanelekile yokudla okunempilo, kuya izinkomba ngazinye. Kwezinye iziguli, kungahle kube kufushane impela, kanti ezinye zidinga ukwamukelwa isikhathi eside. Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo, funda imiyalo ngokucophelela.
Isifo sikashukela sithengiswa emathini okheniwe ka-500 g ngamunye.Ukupakisha kuthatha izinsuku eziyi-10. Umthamo owodwa wansuku zonke ngu-50 g. Ngokungaguquki kwawo, ijeli lifana nejelly ejwayelekile.
Umkhiqizo kufanele uthathwe ngomlomo isikhathi esingu-1 ngosuku. Umphumela wokwelapha umuthi awuxhomeki esikhathini nasendaweni yokusebenzisa. Isifo sikashukela singaphuzwa ekuseni, ekudleni kwasemini, kusihlwa, ngesisu esingenalutho, ngaphambi, ngemuva noma phakathi nesikhathi sokudla. Umthamo onconyelwe wejeli udliwa njengejelly ejwayelekile, oncibilikisiwe emanzini noma ujusi wemvelo eyenziwe ekhaya.
Ithuluzi lingahlanganiswa nezidakamizwa ekwelapheni isifo sikashukela.
Ungathenga ukondliwa kwezokwelapha kuwebhusayithi esemthethweni yomenzi. Kulula futhi ukubeka i-oda ngensizakalo ekhethekile.
Ijeli ligcinwa izinyanga eziyisithupha. Izimo ezifanele: indawo eyomile evikelwe elangeni eliqondile ekushiseni kwe +2 o C.
Ithuluzi lithuthukisa ukusebenza kahle kwezindlela zokwelapha lesi sifo. Inomphumela wokuqongelelwayo, ngenxa yokuthi isenzo saphawulwa ngemuva kwesikhashana ngemuva kokuqala kokuphatha. Ngokwesilinganiso, intuthuko ibonwa ngemuva kwamasonto ama-2-5. Umphumela wokwelapha uyaphikelela noma ngemuva kokuyeka ukuthatha isifo sikashukela.
Ukusetshenziswa komkhiqizo kunikeza imiphumela elandelayo:
iguqula isimo se-retina futhi ivimbele ukuvela kwe-retinopathy kwabashukela,
kusebenze izinqubo ze-metabolic, ngaleyo ndlela zikuvumela ukuthi ulawule isisindo,
kuthuthukisa isimo semizwa
isusa i-cholesterol emibi, ivuselela uhlelo lwezinhliziyo, ivimbela izinkinga ngesimo sokuhlaselwa yinhliziyo, unhlangothi kanye ne-atherossteosis,
qinisa amasosha omzimba, abuyisele i-potency futhi athuthukise i-libido,
kuvimbela umuzwa wokukhathazeka kwamaphethelo.
Ezinye iziguli zazikwazi ukwenqaba imijovo ye-insulin. Ukukhanselwa kungenzeka kuphela ngaphansi kokuqashwa kwezokwelapha okusondele. Kubalulekile futhi ukuhlola ushukela wakho wegazi njalo.
Umphumela omuhle wesifo sikashukela uyaphawuleka ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kwesifo sikashukela. Ithuluzi lizosebenza uma lihambisana nokudla okufanele kanye nokuzivocavoca umzimba.
Kuwebhusayithi esemthethweni yomkhiqizo ungathola izibuyekezo eziningi zesazi. Ama-Endocrinologists asabela kahle ekunikezeni ukudla okwenziwa yisifo sikashukela kwabanesifo sikashukela futhi bekuncoma ezigulini zabo. I-Naturalness Diabetesal iyabonakala, ngenxa yokuthi izingane, abantu abadala, asebekhulile kanye neziguli ezinokungazweli komzimba okubuthakathaka bangazithatha.
Odokotela bathi: umkhiqizo awuthinti kuphela izimpawu zesifo, kodwa nezimbangela zawo. Ijeli ibuyisela ikhono le-pancreas lokuhlanganisa i-insulin eyanele. Abathuthukisi besifo sikashukela bathi umuthi uvusa ukusebenza kwama-insulin receptors, ngenxa yokuthi ama-hormone abandakanyeka kanjani ku-glucose metabolism. Lokhu kuvimbela izinkinga zesifo sikashukela.
Iziguli ngokwazo ziphawula ukwehla kwamazinga kashukela egazini, ukuthuthuka kwesimo sazo esejwayelekile, kanye nokwanda komthamo wokusebenza ngokoqobo emasontweni okuqala okwelapha.
Kunezibuyekezo ezimbalwa ezingezinhle. Imvamisa, abanesifo sikashukela abeneme ngezindleko eziphakeme zomuthi kanye nendlela esebenza ngayo. Iziguli zifuna ukubona umphumela wesikhashana, okungafanele ungawulindele kwisifo sikashukela. Ngenxa yalokhu, abanye abanesifo sikashukela bakholelwa ukuthi ijeli alikhiqizi umphumela wokwelapha ochazwe emiyalweni.
Isifo sikashukela isidakamizwa sanamuhla esithathwa njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi kohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela. Umkhiqizo usungulwe kahle. Ikhalori ephansi enjalo, ecebile ngamavithamini namaminerali umsoco wokwelapha kuzosiza abanesifo sikashukela ukuthi babuyisele amandla ngokomzimba nangokomzwelo.
Uyini lo muthi?
Ngokusho kwabakhiqizi bomkhiqizo, i-Diabetesal yijeli engasetshenziswanga ngaphandle, kepha ngaphakathi futhi inesizinda semolekyuli. Isibonakaliso sokusetshenziswa kwayo ubukhona bomuntu wohlobo 1 noma isifo sikashukela sohlobo 2. Ezimweni ezingandile, kunqunyelwa imisebenzi yokuvikela umzimba eyehlisiwe, kanye nesimo sofuzo esimweni sikashukela (ngokwesibonelo, othile ovela ezihlotsheni eziseduzane unesifo sikashukela).
Isakhi esiyinhloko somkhiqizo i-algae ehlukahlukene, okuyi-fucus. Ikhuthaza ukubuyiselwa kwama-receptors wesifo sikashukela. Lokhu kungachazwa ukuthi kucebiswa ngento ethile ekhethekile - i-fuzoka, etholakala kuphela kubisi lwebele nakulwelwe, futhi ngeke kutholakale kweminye imithombo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi, kuhlangene nezinye izakhi, i-fucus iqinise amasosha omzimba, abe buthaka kushukela, futhi ibuye iguqule namazinga kashukela egazini, esiza ukuvikela i-hypoglycemia ne-hyperglycemia.
Ukusebenzisa kahle isifo sikashukela, abanesifo sikashukela bangabuya ngokushesha ngokomzimba ojwayelekile, futhi bazivikele ngokwabo uma bebhekene nokuthuthukiswa kwezinkinga nezinye izifo ezikhona kulesi sifo.
Ngaphezu kwengxenye eyinhloko - i-fucus algae, ekhishwa emathunjini oLwandle Olumhlophe, isifo sikashukela sihlanganisa nezinye izinto eziwusizo:
I-Jerusalem artichoke isiraphu,
amavithamini A, E, C, D3, F, K, H neqembu B,
Futhi, ijeli "elidliwayo" liqukethe namanzi, okufaka isandla ekuhlanzeni okunzulu komzimba, okungukuthi, ukuqeda ubuthi.
Lo mkhiqizo awunawo amakhalori amaningi, kepha ngasikhathi sinikeza umzimba zonke izinto ezidingekayo, okubaluleke kakhulu kulabo abanesifo sikashukela abahlushwa ukukhuluphala.
Ngabe umuthi uwusizo ngani?
Ngesifo sikashukela, inkinga enkulu inqubo yokuthosa i-glucose. Ngenxa yalokhu kuphazamiseka, amaseli omzimba ayayeka ukuthola ushukela, futhi yikho ngqo okuyiwona mthombo wamandla kubantu. Uma ungasilawuli lesi sifo, khona-ke kungaholela ekwandeni kwesimo, ngisho nokufa. Ngakho-ke, ukwelashwa kuhloselwe ngokuqondile ukungazibeki phansi izimpawu, kodwa ukuzama ukubuyisa indlela yokuhlinzekelwa koshukela kumaseli ukuze ibuyele kwesejwayelekile.
Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukuxazulula izinkinga ezilandelayo:
ngcono imiphumela yokwelashwa okuphambili, ukusheshise,
Hlanza umzimba ubuthi obunqwabelene kanye nobuthi,
thuthukisa inhlala-kahle yesiguli,
yenza lula ukuguqulwa kokudla okukhethekile kwesifo sikashukela.
Ngakho-ke, isifo sikashukela sinomthelela ekujwayekeni kwe-glucose egazini, sinciphise ingozi yezinkinga, futhi sizoba wusizo ekuvimbeleni izifo zenhliziyo, imithambo yegazi nezinye izitho ezibalulekile.
Umphumela wokuthatha umuthi
Kusukela ezinsukwini zokuqala zomuthi, isiguli sinokuthuthuka okulandelayo:
ukwanda kokusebenza nokuqina: iziguli zizizwa zinamandla amakhulu futhi zingenza umsebenzi owazibangela ubunzima ngaphambili
ukulala kuyathuthuka: inqubo yokulala iyenziwa lula, ukulala kuzolile, lapho uvuka, awuzizwa ukhathele noma uswele amandla,
ukudumba kwamajwabu nemilenze kuyanyamalala,
ama-acuity ezibonakalayo ayanda
kuthuthukisa isimo sesikhumba, izinwele nezinzipho.
Yiziphi izinkomba zokusetshenziswa?
Ngaphandle kokuthi i-Diabetesal ingumkhiqizo wemvelo ngokuphelele ngaphandle kwezengezo zamakhemikhali, kunezimo eziningi lapho ukusetshenziswa kwayo kungamukeleki. I-contraindication eyinhloko ifaka:
ukungabekezeleli noma uzwela oluthile kwizakhi zomuthi,
izifo lapho iodine ingakwazi ukusetshenziswa
Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela ngaphambi kokuqala inkambo yokwelashwa nomuthi. Lokhu kuyadingeka ukuze kuqedwe ingozi yokubekezelela umuthi kanye nokuvela kokubi okungahambi kahle.
Ungawuthenga kanjani umkhiqizo futhi kubiza malini?
Okwamanje, ukuphela kwendlela yokuthenga i-Diabetesal uku-oda ku-webhusayithi esemthethweni yomenzi. Emakhemisi, ayithengiswa.
Lapho uthenga isidakamizwa kumasayithi, qiniseka ukuthi unaka ukuthi umthengisi unesitifiketi sekhwalithi kanye nelayisense yokusithengisa. Uma le mibhalo inganikezwanga, khona-ke umkhiqizo ungamanga noma umthengisi uyinkohliso. Le ndlela ukuphela kwendlela yokuzivikela wena nempilo yakho kubantu abasebenza ngokulimala abasebenza kunethiwekhi.
Khokha ngokheshi eposini ngemuva kokuthola izimpahla!
Kodwa inani lentengo yesifo sikashukela alilincane: iphakethe elilodwa lizobiza ama-ruble ayi-3 500, kepha akukho phuzu ekuthengeni iphakethe elilodwa, ngoba inkambo yokwelashwa engaphelele ngeke ilethe imiphumela. Kumaphakeji amathathu adingekayo esifundweni sanyanga zonke, kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angamaRussia ayi-10 500.
Umbono wodokotela mayelana nomuthi
Ngokwengxenye enkulu, isifo sikashukela sizisungule njengendlela enomphumela omuhle futhi okhulunywayo. Odokotela bathi ukusetshenziswa kwayo kuphephile ngokuphelele, ngenxa yokwakheka kwemvelo, kodwa bagcizelela iqiniso lokuthi isifo sikashukela akuyona "iphilisi lesimangaliso" esivimba lesi sifo. Isifo sikashukela aselapheki, kepha ungazama ukwehlisa amandla amandla esifo esonakalisayo empilweni yomuntu nasempilweni (ngokomzimba nangokwengqondo).
Odokotela babuye bagcizelele isidingo sokulandela izindlela eziyisisekelo zokwelashwa, ezibekelwa umuntu ngamunye esigulini ngasinye, ngoba inkambo yalesi sifo nayo iyindlela yomuntu ngamunye, naphezu kwezimpawu nezimpawu ezifanayo.
Ngokuvamile, akukho lutho olubi olungashiwo ngomuthi omusha wesifo sikashukela. Kubalulekile kuphela ukulandela zonke izincomo zikadokotela, imiyalo yokusebenzisa, futhi ucabangele ukuphambana. Isifo sikashukela sisiza iziguli ezinesifo sikashukela zizizwe zingcono futhi zilawule isifo.
Isifo sikashukela sisetshenziselwa ini?
Isifo sikashukela siyisengezo esiyingqayizivele sokudla okunoshukela. Izisungule njengesixazululo esisebenzayo ekwelapheni okuyinhloko. Izinga likashukela lehlisa amazinga kashukela, lifane ne-carbohydrate metabolism, futhi lithuthukise isimo jikelele. Umkhiqizo utholakala ngendlela engajwayelekile yomenzeli wezokwelapha - ngesimo sejeli.
Ithuluzi lithuthukisa ukutholakala kwezicubu ukungena kwe-insulin futhi kunciphisa ubungozi bezinkinga ezihambisana nalesi sifo. Umkhiqizo wemvelo unokuqukethwe kwekhalori okuphansi, umunca kahle futhi ubekezelelwa yiziguli, futhi unomphumela wokwelapha oshiwo. Akunangozi ngokuphelele futhi hhayi umlutha. Isakhi esiyinhloko salo muthi yi-fucose, etholakala ku-fucus algae. Isebenza ngokuqinile amazinga kashukela, ivimbela i-hyperglycemia, futhi iqinisa amasosha omzimba.
Isifo sikashukela sinamakhono ahlukahlukene:
kuthuthukisa isimo jikelele
isetshenziswa ngokudla kwesifo sikashukela
kuthuthukisa ukusebenza ngempumelelo kwezidakamizwa,
kuvimbela ukukhula kwezinkinga.
Ukuthatha umuthi ngokuhambisana nokwelashwa okujwayelekile kuthuthukisa kahle isimo sesiguli, kufane nezimpawu zonke, kuthuthukise ikhwalithi yempilo. Ithuluzi linombono wochwepheshe nesitifiketi sekhwalithi. Umuthi uyathandwa phakathi kwabathengi ngenxa yemiphumela yawo ephezulu kanye nokwakheka kwemvelo.
Ukwakheka kwalo muthi
Umphumela omenyezelwe utholakala ngenxa yezakhi ezihlukile.
Ukwakheka komkhiqizo kufaka phakathi:
Fucose. Ibuyisela umsebenzi wama-receptors, ilawula amazinga kashukela, isebenze izivikela zomzimba, iqinise umgudu wokugaya ukudla, ithuthukisa ukufakwa kwezakhi zomzimba.
Ama-cranberry. Ingxenye ecebile ngama-amino acid ne-vithamini C. Yandisa ukungatheleleki, isusa ubuthi, ihlukanise isenzo se-radicals yamahhala, isebenze ukuhamba kwegazi.
I-Jerusalema artichoke. Umthombo wemvelo we-insulin. Ijwayelekile amazinga kashukela, athinta kahle umgudu wokugaya ukudla.
I-Chrome. Into ebaluleke kakhulu kubantu abanesifo sikashukela. I-Chromium ilawula umfutho wegazi futhi inomphumela omuhle ohlelweni lwethambo nenhliziyo.
Izinkomba kanye ne-contraindication
Isifo sikashukela siphathwa emacaleni alandelayo:
Uhlobo 2 sikashukela
ukugcina uhlelo lwenhliziyo,
ngokuphazamiseka okuthambile komgudu wokugaya ukudla.
Ukuthintana nokwamukelwa kwejeli: ukungahambi kahle komkhiqizo, ukungabekezelelani iodine, imibandela engafaki ukuphuza iodine.
Imiphumela emibi engaba khona ifaka phakathi ukushisa kwenhliziyo kanye nemiphumela yokwaliwa.
Esikhathini esifushane, isifo sikashukela sesizimele emakethe.
Izinzuzo zalo ezisobala zifaka:
ukunciphisa ushukela okusebenzayo,
cishe akukho kuphikisana
okungemlutha kanye nemiphumela emibi
umphumela onenzuzo emzimbeni wonke,
kunciphisa ubungozi bezifo ezihlangene,
umphumela omuhle oqinisekisiwe.
Ngesidingo esandayo sesifo sikashukela ezitolo eziningi eziku-inthanethi, ungathenga inkohliso. Udinga uku-oda umkhiqizo ngokuqondile kumenzi - lokhu kuqinisekisa ubuqiniso, ikhwalithi yejeli nentengo engabizi. Kuwebhusayithi esemthethweni yezaphulelo zabathengi nokunikezwa okuhle. Lapho ungathola ukuthi kubiza malini ukudla. Isifo sikashukela asithengiswa emakhemisi futhi asisi umuthi.
Umbono wodokotela neziguli
Bobabili odokotela neziguli baphendula ngokuqinile kulowo mkhiqizo. Umsoco uzikhombisile ngasohlangothini oluhle. Abathengi abaningi bayawubona umphumela obonakalayo, inhlala-kahle ethuthukisiwe, umphumela owengeziwe onenzuzo. Phakathi kwezikhathi ezimbi zokubuyekezwa mayelana nesifo sikashukela kunentengo ephakeme, abanye abasebenzisi bebengathandanga ukuvumelana kwe-gel.
Phakathi kweziguli, umsoco uye wazibonakalisa ohlangothini oluhle. Ukwakheka kwemvelo kususa imiphumela emibi, kuthinta kahle isimo esijwayelekile. Kepha isifo sikashukela asithathi indawo yokwelashwa okuyinhloko futhi asivimbeli lesi sifo. Ngenqubo yokwamukelwa, ngincoma ukuthi ufunde imiyalo, uthintane nodokotela futhi unake zonke izincomo zakhe.
I-Agapova M. Futhi, i-endocrinologist
Amazinga kashukela aphezulu ayisona isigwebo namuhla. Umuthi wanamuhla uxazulula inkinga ngendlela yezidakamizwa nengeyona yezidakamizwa. Elinye ikhambi lemvelo lesifo sikashukela yi-Diabetes. Umkhiqizo ubekezelelwa kahle yiziguli, wehlisela ushukela, uqinisa umzimba, uvimbela ukuthuthukiswa kwe-concomitant pathologies. Kwimikhuba yami, njengokwelashwa okuyinhloko, ngibeka kuphela imithi esekelwe esithombeni sasemtholampilo. Ngingancoma umkhiqizo ezigulini zami njengokungezwa kwesikimu. Ngiphawula ukuthi isifo sikashukela sikulungele kahle njenge-prophylaxis. Kodwa yeka ukwelashwa okuyinhloko akukufanele.
I-Samoilova E.N., i-endocrinologist
Isifo sikashukela sinconyelwe kimi ngumngane owodwa njengomkhiqizo omuhle futhi osebenzayo. Ngemuva kwezinsuku eziyi-10 zokuthatha, ngizwe ukuthuthuka okukhulu. Ukugaya kubuyele kwesejwayelekile, isikhumba saba namandla, futhi umlomo owomile wanyamalala ngokuphelele. Ekuqaleni, angikwazanga ukujwayela ukungaguquki kwejeli yomkhiqizo isikhathi eside, kwathatha amasonto ambalwa. Kumathebhulethi, kungaba lula ukuwathatha. Kepha umphumela wezimali uzizwa - imali ayichithwanga. Ngingayincoma.
U-Ana, oneminyaka engama-33, uSaratov
Nginqume uku-oda jar elilodwa lesampula. Njengoba nginesigaba sokuqala sikashukela, ikhambi lingisizile. Ngemuva kwezinsuku eziyi-14, ushukela ubuyela kokujwayelekile, isimo somzimba sathuthuka, ingcindezi yayeka ukukhathazeka. Ngisho ngilahlekelwe isisindo esincane. Umuthi uthathe izinyanga ezi-2, entwasahlobo elandelayo ngihlela ukuphinda futhi ukwelashwa. Intengo yokudla, kunjalo, iphezulu, kepha angifuni ukonga impilo yami.
USvetlana, oneminyaka engama-45 ubudala, eSt
Ngaphezu kwemithi, bengilokhu ngithatha izakhiwo ezihlukene zezitshalo iminyaka emi-5 manje. Abanye basizile, kodwa abanye abakwazanga. Kwi-Intanethi ngathola ukunconywa ngesifo sikashukela. Nginqume ukuyizama. Isehlukaniso noma cha - nginquma kuphela ngemuva kokuzama. Ngakho-ke, umkhiqizo uthuthukisa inhlala-kahle, unciphisa ushukela kancane, uthuthukise ukugaya, futhi ukhulule ukuvuvukala. Ukudla akubanga nemiphumela emibi - kuthathe izinyanga ezimbalwa. Ngokubambisana nokwelashwa okuyinhloko kunikeza umphumela omuhle. Okudidayo okuncane, yebo, intengo. Futhi ngakho-ke konke kuhle.
UStanislav, oneminyaka engama-49, uKamensk-Uralsky
Isifo sikashukela siwumkhiqizo wemvelo osebenzayo ongenazo iziphikiso. Esikhathini esifushane wakwazi ukuthola ukunakwa nokuzethemba kuye, athole izibuyekezo ezinhle kwiziguli ezinesifo sikashukela. Ithuluzi linciphisa ushukela, liqinisa umzimba, livimbela ukukhula kwezifo ezihlangene. Manje wonke umuntu angathuthukisa impilo yabo futhi azizwe nemiphumela emihle yomkhiqizo uqobo.
Izici eziwusizo nokwakheka kwalo muthi
Isifo sikashukela siwumkhiqizo wemvelo futhi siza ngesimo sejeli. Akunakukwenza ngokwejwayelekile amazinga kashukela, kodwa futhi kunganciphisa amathuba okuba nezinkinga kushukela. Njengoba wazi, kuleli cala bangaba baningi: inhliziyo, imithambo yegazi, ezinye izitho zangaphakathi nezingqimba zezicubu. Umuthi wesifo sikashukela, osetshenziswa njalo noma noma ngezikhathi ezithile, uyakwazi:
lihlehlise ukusetshenziswa kwengxenye ye-hormonal esikhathini esithile,
khuphula izinga lokuphumelela kokwelashwa, futhi futhi kuhlanganiswe nezinye izindlela zokwakha, noma ngabe amaphilisi noma ezinye izidakamizwa,
Hlanza umzimba wezakhi ezinobuthi,
engeza ukudla kwesifo sikashukela nenkambo yonke yokwelashwa.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwesifo sikashukela kungathuthukisa inhlalonhle ephelele. Izici ezinhle ezethulwe zichazwa ngokwakhiwa kwemvelo, okuqukethwe kilojoule ophansi kanye nokuntuleka koshukela ekwakhiweni. Ngakho-ke, kuhlu lwezakhi kukhona ama-algae ansundu (i-fucus), ama-cranberries, i-articoke syrup (i-prebiotic). Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwesifo sikashukela kuhlanganiswa yi-chromium engezwe ifomu le-organic. Ngokuvamile, ukwakheka kwayo kwe-biochemical kuhlolwa njengokuhlukile futhi kufaka nezinto ezinjalo eziyizingxenye zomzimba ezihlanganayo.
Sekukonke, sikhuluma ngezinto ezingama-42, phakathi kwazo kukhona iodine, i-calcium, i-magnesium, i-selenium, i-barium, i-zinc nezinye. Ngaphandle kwazo zonke izici ezinhle zokubunjwa, kunconywa ukubonana nodokotela onguchwepheshe ngaphambi kokuwusebenzisa. Sebenzisa noma iyiphi i-analog yesifo sikashukela kukhungathekile.
Malini isifo sikashukela, futhi ungasithola kanjani?
Abaningi banesidingo sokuthi kubiza malini isifo sikashukela nokuthi ungasitholaphi. Umuthi owethulwe awutholakali ekhemisi, ngoba uzokwazi ukuwuthenga kuphela kuwebhusayithi esemthethweni yabakhiqizi bejeli.
Ababutheli bakhulume iqiniso lonke ngesifo sikashukela! Isifo sikashukela sizohamba ngezinsuku eziyi-10 uma usiphuza ekuseni. »Funda kabanzi >>>
Iphakethe elilodwa lokwakheka lenzelwe izinsuku eziyi-10, kuyilapho ukusebenza ngakunye kufaka i-50 g. Izindleko ezimaphakathi zephakeji ngayinye eRussia akufanele zibe ngaphezu kwama-ruble ayi-3 500. Ngaphambi kokuthenga ijeli eyethuliweyo, kunconywa kakhulu ukuthi uzijwayeze ngama-nuances wokusetshenziswa kwayo.
Izici zesicelo sikashukela
Ngokungaguquguquki kwalo, umuthi i-Diabetesal ufana nejelly. Ngenxa yalokhu, ngokungafani nezinye izindlela zokwelapha, umphumela osheshayo nomnene uyabonakala. Ngaphezu kwalokho, isifo sikashukela simunzwa kangcono kakhulu nangokugcwele, okungeke kuvuse ukucasuka kwesisu.
Izici ezikhethekile zifanelwe ukunakwa okukhethekile, okungukuthi:
ukuze uzuze umphumela obaluleke kakhulu wezokwelapha, kunconywa ukuqala ukusebenzisa umuthi ngenani elincane. Lokhu kuzosusa ukuthuthukiswa kokungafani komzimba,
esikhwameni esisodwa kungu-10 gr. Ngokwesinxephezelo esibi sikashukela kanye nokuba khona kwezinkinga, umthamo wokuqala akumele ungabi ngaphezu kwama-gramu amahlanu. phakathi nosuku
kancane kancane inani lemali lingakhushulwa, kepha noma kunjalo akufanele libe ngaphezulu kwesachet ngosuku.
Ngokubuka ukwakheka okunothile kwesifo sikashukela, akunconywa ukusebenzisa izithasiselo zevithamini nezimbiwa ngasikhathi sinye, ngoba lokhu kungaholela ku-hypervitaminosis. Ngaso leso sikhathi, inhlanganisela yejeli enamaphilisi e-insulin nawokwehlisa ushukela kungadingeka. Ukucacisa imininingwane yenkambo yokutakula kuleli cala, kunconywa ukubonana nodokotela wakho.
Isifo sikashukela singasetshenziswa ngaphandle kokusetshenziswa kokudla noma kwamanzi. Ngasikhathi sinye, kuzoba okulungile kakhulu uma ukusetshenziswa komkhiqizo kwenziwa ngasikhathi sinye sosuku. Ngakho-ke indlela elula kunazo zonke kuzoba ukuzibamba wena nezinkomba ezibalulekile: ushukela, cholesterol, umfutho wegazi.
Isikhathi esifanele sokusetshenziswa kwesengezo sikashukela inyanga eyodwa. Ngemuva kokuphothulwa kwayo, kunengqondo ukwenza isheke lomzimba eliphelele, ukuhlola imiphumela etholakalayo.
Uma isimo sesifo sikashukela sesithuthuke ngempela, isifo sikashukela singasetshenziswa ngokwengeziwe, kepha kuphela ikhefu lenyanga eyodwa. Esikhathini esizayo, ukushintshana okunjalo kuyanconywa ukuze kuqedwe umlutha womkhiqizo. Ukugcinwa komkhiqizo kufanele kwenziwe endaweni emnyama, emazingeni okushisa +1 degrees kuya ku-+15. Amanani amaningi noma amancane aphansi kuzoholela ekulimaleni kwejeli. Contraindication ehambisana nokusetshenziswa kwesifo sikashukela ifanelwe ukunakwa okukhethekile.
Ingabe ukhona umphumela wokuthatha umuthi?
Vele, umuntu onesifo sikashukela kufanele azi konke mayelana nokusebenza kokwelashwa okulethwe ngujeli. Uma kusetshenziswa njalo, izinguquko ezithile ezinhle zizophawulwa. Phakathi kwazo ukuthuthuka kokufakwa ushukela, ukuzinza okuthe xaxa nangokufanele kwamazinga kashukela.
Phakathi kwemiphumela emihle kuzoba nzima ukunaka ukwehlisa amathuba ezinkinga. Lokhu kungenzeka ngokuqinisa ukungatheleleki kanye nokwenza ngcono umzimba. Ngaphezu kwalokho, umphumela wokusetshenziswa kwesifo sikashukela ukuguquguqula indlela yokugaya ukudla, ukuthuthukisa nokubuyisa ukuhanjiswa kwegazi emalungeni. Kwabashukela, ijeli izoba wusizo ngenxa yokujwayelekile kwezinqubo ze-metabolic kanye nokunciphisa umzimba. Ukugxila okubalulekile kufanele kukhokhwe ekubonakaleni kwamandla kumuntu okhathele isifo sikashukela.
Imininingwane ethuliwe ayiqinisekiswa kuphela yiziguli ezinesifo esiveziwe, kodwa futhi nezazi ze-endocrinologists. Kodwa-ke, ijeli aliyona eyisimangaliso futhi akufanele lithathwe njengomuthi kuphela. Isifo sikashukela siyisengezo esihle kakhulu kumaphilisi we-insulin noma kashukela. Ukusetshenziswa kwayo ngokwahlukaniswa nenkambo yokulungiswa kokuhlunyelelwa ayikwazi ukusebenza kahle ezinkingeni noma kwifomu elibunjiwe likashukela isikhathi eside.
Isifo sikashukela esinconywa yi-DIABETOLOGIST esinolwazi u-Aleksey Grigorievich Korotkevich! ". funda kabanzi >>>
Ngokusho kochwepheshe, isifo sikashukela sikufanelekela ukusetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2. Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kuyadingeka ukubonisana nodokotela oyi-endocrinologist. Nguye ozocacisa izakhiwo eziwusizo zokwakheka, ikakhulukazi ukusetshenziswa kwayo, ama-contraindication.
Yini isifo sikashukela
Ukudla okungenakulinganiswa okwelashwa okwenzelwe abantu abanesifo sikashukela kubizwa ngokuthi yi-Diabetes. Lesi sidakamizwa esingajwayelekile ngokweqile, okungeyona iphilisi, kepha isengezo esiyingqayizivele sokudla ngendlela yejeli elenziwe ku-algae egxile kuyo. Ucwaningo lufakazele ukuthi umuthi unomphumela omuhle emzimbeni wesiguli, uthuthuka kahle. Umuthi awuthengiswa emakhemisi; ungafaka i-diabetesal kuphela nge-Intanethi kuwebhusayithi esemthethweni ngemuva kokubonisana kwangaphambilini.
Isifo sikashukela sinconywa ukuba sithathwe njengesengezo sokudla kunoma yisiphi isigaba sikashukela noma ukungeza ukudla okwelaphayo. Umuthi uzonikeza umphumela omkhulu kunayo yonke esigabeni sesibili salesi sifo. Ngefa, odokotela batusa ukusebenzisa umuthi njenge-prophylaxis yalesi sifo. Umuthi ubujwayeza ushukela wegazi, uvimbela ukukhula kwezinkinga zohlobo oluhlukile, futhi usize ukunciphisa ukunciphisa i-insulin. Akukho okuphikisana nobudala. Ukubuyekezwa okuhle kodokotela kuqinisekisa usizo nokusebenza kahle kwalo muthi.
Imiyalo Yesifo Sikashukela
Ngenxa yokungaguquguquki kwejelly, umkhiqizo uthakwa kangcono ngumzimba, uhlanganiswe nezithasiselo zokudla. Ijeli lifakwe emahashini angama-gramu angama-50, iphakethe ngalinye lifaka inkambo yezinsuku eziyishumi zokwamukelwa. Isiguli kudingeka sithathe eyodwa sikhonze nsuku zonke. Ukuhlanganiswa komkhiqizo ukuthi kusebenza kahle lapho kuxutshaniswa ujusi, ubisi noma amanzi. Odokotela bathi kungcono ukuthatha umuthi wesifo sikashukela ezifundweni eziningana ngamakhefu weviki ukufeza umphumela.
Ukusebenza kahle kohlelo
Umuthi usebenza kahle njengesijobelelo sokudla komsoco sikashukela, akusona isengezo sokudla. Izibalo zikhombisa ukuthi iningi leziguli libona ukuphucuka kwesimo salo, ukuhamba okukhulu kakhulu kanye nokungabikhona kwemiphumela emibi ngesicanucanu, ukozela, ukukhathala okungapheli, ezinye izidakamizwa ezilwa nesifo sikashukela ezivame ukuba nazo. Izinzuzo eziphambili zokusetshenziswa kwayo:
nokugcina amazinga eglucose
amandla okuhlanganisa nezinye izidakamizwa,
Ukuqedwa kobuthi emzimbeni,
ukwanda kwesikhathi phakathi kwemithamo ye-insulin,
ukulawulwa komzimba kanye nokulawulwa kwesisindo,
ukwenza ngcono isiguli esinesifo sikashukela,
ukuvimbela ukwenzeka kwesifo.
Ukwakheka kwemvelo kwesidakamizwa kuqeda imiphumela emibi ngemuva kokuphatha. Kodwa-ke, ukubonakaliswa kwe-allergic kuyenzeka ngokubekezelela komuntu ngamunye kwizakhi ezakha ukwakheka. Ukuvimbela izimo ezinjalo, funda ngokucophelela ukwakheka ngaphambi kokuqala isifundo. Kuzo zonke ezinye izimo, akunayo imiphumela emibi. Izimali ezihlanganisiwe - amandla okwamukela ngaphandle kokubukelwa okuqinile kwesikhathi sesikhathi. Odokotela batusa inkambo yokwamukelwa yanyanga zonke ngekhefu lesonto noma amabili, bese baphinda futhi izifundo.
Imibandela yokuthengisa nokugcina
Umuthi kumele ugcinwe endaweni eyomile engafakwanga yilanga. Umuthi awunangozi ngokuphelele, kepha kuyanconywa ukuwenza ungatholakali ezinganeni. Impilo yeshalofu yomkhiqizo izinyanga eziyisithupha. Ungathenga isifo sikashukela kuwebhusayithi esemthethweni yomenzi. Isayithi lihambisa umkhiqizo kuwo wonke amazwe e-CIS kunoma yiziphi izifunda kanye namadolobha, izindleko zokulethwa kanye nomkhiqizo uqobo ubalwa ngemuva kokugcwalisa uhlu lwemibuzo bese ubuyisela opharetha besayithi.
Okwamanje, isifo sikashukela asinazo izifanekiselo eziphelele kungaba ngesenzo noma ngendlela yokukhishwa. Kumele kukhunjulwe ukuthi le mithi elandelayo ayinamphumela ofanayo futhi ayiniki umphumela we-Dibel, ngoba ayinazo lezo zinto ezibamba iqhaza elibaluleke kakhulu esenzweni somuthi - i-fucus algae. Kodwa-ke, njengenye indlela, abanye odokotela basikisela ukusebenzisa le mithi elandelayo:
Intengo Yesifo Sikashukela
Ukuthengwa kwalesi sidakamizwa kungenziwa kuphela ngewebhusayithi esemthethweni, ngemuva kokugcwalisa ifomu lesicelo futhi ukhuluma nomuntu obonisana naye. Izindleko zomkhiqizo zifundo zezinsuku eziyishumi zingama-ruble ayizinkulungwane ezintathu namakhulu amahlanu, ngenyanga - cishe izinkulungwane eziyishumi. Izintengo ezithile zomkhiqizo zibikwa ngabacebisi ocingweni olubuyayo. Lapho uthenga, gcina ukhumbula ukuthi inkambo ende yokuphuza umuthi inomphumela omningi ukwedlula yezinsuku eziyishumi.
U-Ana, oneminyaka engu-64 Emzabalazweni wokugcina amazinga evamile kashukela egazini ngazama konke. Udokotela weluleke ukuthi asebenzise isifo sikashukela, engimbonga kakhulu! Ngenxa yaleli jeli, ngizizwa ngingcono kakhulu futhi akufanele ngihlole ushukela wegazi wami kaningi. Bengihlale ngilandela izifundo isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-3 futhi angizukuyeka. Ngincoma kakhulu ukuqala ukwelashwa ngalo.
USergey, 25 Umuthi lo wathengwa ngokuya ngezibuyekezo zabangani nangemva kokubonisana nodokotela ngogogo wakhe. Ugogo wenqaba isikhathi eside - intengo yayinamahloni. Ngaphikelela futhi ngibona ukuthi ngangilunge kangakanani. Ugogo uzizwa engcono kakhulu, odokotela baphawula ukuthuthuka kwesimo sakhe. Ngincoma nakanjani ukuzama - imiphumela iyamangalisa.
UVictor, 54 Umzimba waqala ukudonsa i-glucose kubi kakhulu, odokotela banquma imishanguzo futhi ngasikhathi sinye bacebisa ukuthi basibhekisise isifo sikashukela - bathi, kuyinto enhle njengekhambi elingeziwe. Ngifunde imiyalo yomuthi nezibuyekezo ku-Intanethi, ngaqala ukuthatha. Ngokubambisana nokwelashwa okuyinhloko, kusebenza kahle, kulawula ushukela wegazi. Ngiyeluleka, kepha ngemithi evela kudokotela.
UTatyana, 32. Etholakale nesifo sikashukela eminyakeni embalwa edlule, kwaba nokuthuthumela kwemvelo. Odokotela bakholelwe ukuthi ungaphila naye ngokugcwele nangokujwayelekile. Ngemuva kweminyaka eminingana ngiphuza umuthi, ngezwa ukubuyekezwa mayelana nesifo sikashukela - bengisemlilweni ukuzama. Ngokwamava, ngingasho ukuthi ngizizwa ngingcono naye kunokuba ngaphandle kwakhe. Amandla ngokwengeziwe, isisindo sesiyekile ukwanda ngokushesha.
Ukuchazwa komkhiqizo wesifo sikashukela
Lesi sidakamizwa siwukudla kokudla okwelaphayo. Lokhu akusona isengezo sokudla, futhi futhi akusona umuthi. Ithuluzi "Isifo sikashukela" alinazo izifaniso, lingokwemvelo ngokuphelele. Lesi sidakamizwa sakhiwa izikhungo zesayensi zaseRussia, lapho kunakwa khona ngokukhethekile ekunakekelweni kokudla kanye nokudla kweziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus (kusebenza kuzingane nakubantu abadala).
Isifo sikashukela yijeli elisetshenziswayo (ijeli) elibekwe embizeni ekhethekile. Le ndlela yokukhishwa kwesidakamizwa iqinisekisa ngokushesha, kanye nokwelashwa okumnene, ngokungafani namatafula noma amaphilisi. Indlela yejeli yalo mkhiqizo isebenza kakhudlwana futhi imnene esiswini. Ngasikhathi sinye, umzimba womuntu onesifo sikashukela ufunda ngokushesha umsoco onempilo.
Isifo sikashukela isidakamizwa esine-khalori ephansi, engenawo ushukela. Lo mkhiqizo wokwelapha waseRussia unomphumela wokuqongelelwayo, ngakho-ke umphumela wawo uhlala isikhathi eside.
Isifo sikashukela, imiyalo okufanele ifakwe embizeni nomuthi, iqukethe lezi zinto ezilandelayo:
- Fucose. Le ngxenye itholakala olwandle lomndeni wakwa-Fucus, onokwakheka okumangazayo. Ziqukethe izinto eziningi kakhulu ezingama-42, kufaka phakathi i-magnesium, isibabule, i-calcium, iodine, i-iron, ifosforasi, i-silicon, i-barium, njll., Kanye nohlu olubanzi lwamavithamini, ama-pantothenic kanye nama-folic acid, i-fiber, ama-amino acid.
- Ama-cranberry. Ijusi elivela kule berry lingumthombo obalulekile wamavithamini C, okuyinkimbinkimbi yamaminerali, kanye nama-organic acid. Ama-cranberry angasusa izinto ezinobuthi emzimbeni wesifo sikashukela.
- I-Jerusalem artichoke isiraphu. Le nto iqukethe inulin, evimba ushukela ukungena emathunjini. Futhi i-artisoke isiraphu inyusa ukuzwela kwamangqamuzana ku-insulin.
- I-Chrome ngesimo se-organic. Le ngxenye ilawula amazinga kashukela. Ukuntuleka kwe-chromium ekudleni kungadala i-hyperglycemia (isifo somtholampilo lapho kunokwanda ushukela wegazi). Futhi le ngxenye futhi isiza ukuguquguqula umfutho wegazi.
Imiphi imiphumela engalindelwa?
Ngokusho komkhiqizi, isifo sikashukela iyithuluzi elihle kakhulu lokusekelwa kwabanesifo sikashukela. Incazelo yomkhiqizo ibuyekeziwe, kepha ongakulindela kukho akuyona. Ngakho-ke, leli thuluzi linikeza le miphumela:
- Kuthuthukisa umbono kanye nesimo se-retina (wonke umuntu uyazi ukuthi abantu abanesifo sikashukela bavame ukuba nezinkinga zokubona).
- Isiza ukulawula isisindo.
- Kuthuthukisa izinqubo ze-metabolic.
- Kuvimbela ukuvela kwezinkinga.
- Kuthuthukisa isimo esingokomzwelo sesiguli.
- Isiza ukunciphisa i-cholesterol yegazi.
- Kuthuthukisa isimo senhliziyo nemithambo yegazi.
-Iqinisa izivikelo zomzimba.
- Kuthuthukisa libido, ukulwa ukulwa.
- Kuvimbela ukubonakala kwesizungu emilenzeni.
Kusho "Isifo sikashukela": imiyalo esetshenzisiwe
Ukusebenzisa lo mkhiqizo wokukhiqiza waseRussia kulula kakhulu. Imbiza iqukethe i-10 servings, i.e. izikhathi eziyishumi. Isikhathi esingu-1, isiguli sidinga ukuthatha i-50 g yale jelly yokuphulukisa. Akukhathalekile ukuthi ukugwinya: ngaphambi kokudla, ngemuva kokudla noma ngemuva kokudla. Futhi i-Diabetesal ingahlanganiswa namasiphu ahlukahlukene namanzi. Ngakho-ke, kwanele ukuthatha umthamo owodwa waleli jelly kanye ngosuku ukuze ujabulele impilo egcwele.
Umuthi "Isifo sikashukela", intengo abantu abaningi abangabonakala bengabekezeleleki, ungathengwa ku-Intanethi. Ngeshwa, akunakwenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi uthole leli jelly lokuphilisa ekhemisi. Yini izindleko zalo muthi waseRussia ohlose ukuthuthukisa isimo sesiguli esinesifo sikashukela? Ngakho-ke, eRussia cishe ama-ruble angama-3 500 kumele akhokhelwe nge-1 can ye-Diabetes. Intengo inge-10 servings, okuwukuthi, lesi sidakamizwa sanele isiguli ngezinsuku eziyi-10 kuphela. Uma ubala inyanga, khona-ke kuphuma ingqikithi: ama-ruble ayi-10 500. Lokhu kwaneliswa ngemali ephezulu yomkhiqizo okuhloswe ngayo ukugcina isimo esijwayelekile sesifo sikashukela.
Impendulo enhle evela kochwepheshe
Umkhiqizo wezokwelapha "Isifo sikashukela" unokubuyekezwa okuhlukahlukene. Njengoba lesi isidakamizwa esisha, odokotela abaningi abakazwa ngakho. Kepha labo asebehlangabezane nesenzo sabo, qaphela ukuthi ijeli elithi "Diabetes" liyasebenza ngempela ngezimanga. Odokotela bayaqiniseka ukuthi lesi sidakamizwa senza umsebenzi waso obaluleke kakhulu - sibuyisela ikhono lesifo sikashukela sokudla ushukela ngokujwayelekile. Ukungena emangqamuzaneni, i-fucose - okungenye yezakhi zomuthi - kubuyisela imisebenzi yama-insulin receptors, futhi kuvuselele amandla abo okuphendula ngendlela efanele i-glucose egazini. Odokotela banesiqiniseko sokuthi umkhiqizo wesifo sikashukela akaqedi nje kuphela izimpawu, kodwa futhi ulwa nezimbangela zesifo. Futhi, ochwepheshe baphawula ukwakheka okuyingqayizivele kwalesi sidakamizwa, okungaqukethe noma yikuphi ukunakekelwa kokugcina, futhi futhi akuhambeli ukwelashwa okushisa. Zonke izinto zalo mkhiqizo waseRussia zingokwemvelo futhi zinempilo. Futhi intengo ephezulu yomuthi, ngokusho kodokotela, inesizathu esizwakalayo.
Impendulo engemihle evela kochwepheshe
Ngeshwa, ukubuyekezwa kwethuluzi "kwesifo sikashukela" kodokotela akugcinanga ngokuthopha, kepha futhi akuvumi. Ngakho-ke, odokotela abaningi abakafiki kulo mkhiqizo, obonakale emakethe muva nje. Ngakho-ke, odokotela abakwazi ukunikeza ukuhlolwa okwanele kwaleli thuluzi. Kodwa-ke, abaningi babo baphawula ngezenzo zeziguli zabo, ezingagcinanga ngokuzwa ngalo muthi kuphela, kodwa futhi basisebenzisa. Kuvela ukuthi iziguli, ngaphandle kokubonisana nabezokwelapha abaphethwe yi-endocrinologists, zimane zaphonsa ukwelashwa kwazo okujwayelekile ngamaphilisi alwa nesifo sikashukela futhi zathenga umuthi wesifo sikashukela. Kodwa ekugcineni kwavela ukuthi isimo seziguli sanda kuphela. Odokotela basusa amanye amaphesenti wecala esimweni esinjalo kumkhiqizo wesifo sikashukela. Kodwa-ke, imbangela yokuwohloka yisiguli uqobo. Ngemuva kwakho konke, awudingi ukuyeka ukwelashwa ngemithi ebekwe udokotela. Ochwepheshe bathi ungathatha umkhiqizo "Diabetesal", kodwa kuphela ngokuhambisana nokwelashwa okunqunywe yi-endocrinologist. Yize kunjalo, ijeli lilodwa alikwazi ukusindisa umuntu kwisifo sikashukela sohlobo 2.
Futhi abakwa-endocrinologists babuza abantu ngaphambi kokuthenga lo mkhiqizo waseRussia, ukubonisana nabo ukuze bakhiphe ukubukeka kwemiphumela engemihle.
Manje uyazi ukuthi siyini isifo sikashukela, ukubuyekezwa kodokotela ngakho, ukwakheka kwayo, nemithetho yokwamukelwa sekubuye kwahlolwa. Sithole ukuthi lo muthi uvele muva nje, ngakho abanye odokotela abakaze bahlangane nawo. Futhi labochwepheshe ababa nenhlanhla ngokwanele yokufunda ngalo mkhiqizo wokwelapha waseRussia, baphendula kahle ngakho. Iziguli kufanele zazi ukuthi izindleko zaleli thuluzi ziphakeme impela, kepha ngeqiniso abantu abaningi bazimisele ukunikela ngemali eningi ukuze baphile impilo ejwayelekile, hhayi yokugcotshwa yizinkinga zezempilo ezahlukahlukene.